Golaha wasiirada Galmudug oo kulan xasaasi ah yeeshay. – Radio Daljir
Agoosto 23, 2016 11:01 b 0
Cadaado, Aug 23 2016–Golaha wasiirada maamulka Galmudug ayaa maanta kulan xasaasi ah waxa ay ku yeesheen magaalada Cadaado ee gobolka Mudug, waxaana kulanka looga hadlay qodobo dhowr ah, iyadoo si gaar ah warbixin looga dhageystay Wasaarada Maaliyada maamulka Galmudug.
Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) oo Madaweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa shir Gudoominayay kulanka ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada Galmudug.
Wasaarada Maaliyadda maamulka Galmudug oo kulanka warbixin looga dhageystay ayaa soo bandhigtay waxqabadkeeda ku aadan sanadkii la soo dhaafay, Wasaarada Maaliyadda Maamulka Galmudug ayaa sidoo kale ka hor sheegtay Golaha Wasiirada Galmudug in ay sii dar dar gelin doonto Howlaheeda shaqo.
Kulanka Golaha Wasiirada Galmudug ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay amniga guud ee deegaanada Galmudug, waxaana Golaha Wasiirada Galmudug ay sheegeen in dhowaan ay bilaabi doonaan Howlgallo Shabaab looga saarayo deegaanada Galmudug.
Gudiga qabanqaabada aaska general M. C. Samatar oo shiray.